Chelsea oo rag u soo daawada u dirsatay kulankii Champions League ku dhexmaray Kooxaha Lyon iyo RB Leipzig… (Yey Blues ka doonaysay kulankaas?) – Gool FM
(London) 12 Dis 2019. Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa la soo warinayaa inay rag u soo daawada u dirsatay kulankii Champions League ku dhexmaray kooxaha Lyon iyo RB Leipzig, iyadoo qorshaha Blues uu ahaa inay kulankaas ka eegato labo ciyaaryahan.
Indho-indheeyeyaal ka socda kooxda Chelsea ayaa ka qeyb galay kulankaas, waxaana ay soo daawadeen sida la warinayo xiddigaha Dembele iyo Werner.
Sida uu warinayo Wargeyska Daily Mail, Chelsea ayaa rag u soo daawada u dirsatay kulankii Champions League ee habeen hore dhexmaray kooxaha Lyon iyo RB Leipzig, kaasoo ay ku kala baxeen barbaro 2-2.
Blues raggaan ay dirsatay ayaa la soo warinayaa inay daawanayeen qaab ciyaareedka Weeraryahanka Lyon ee Moussa Dembele iyo Dhaliyaha kooxda RB Leipzig ee Timo Werner kuwaasoo ay doonayso Chelsea inay la soo wareegto.
Macallin Frank Lampard ayaana la sheegayaa inuu doonayo oo muhiimadda koowaad siinayo Weeraryahanka Lyon ee Moussa Dembele kaasoo uu rabo inuu shaxdiisa ku xoojiyo suuqa kala iibsiga xiddigaha ee bisha Janaayo.